MYUTSAWMYIT : စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသတင်း: August 2013
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:10 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:37 PM No comments:
အထက်လွှတ်တော်၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အမတ် ကို ပြည်သူများ ဆန္ဒပြ
ပဲခူးတိုင်း၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပေါင်းတည်မြို့မှ ပြည်သူ ၁၀၀ ကျော်သည် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာမြဦးကို အလိုမရှိကြောင်း သြဂုတ် ၂၈ ရက် နံနက် ၈ နာရီကျော်က ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ထို အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်သည် ပေါင်းတည်မြို့ရှိ ကုသိုလ်ဖြစ်
ဆေးခန်းမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု၏ ကျောထောက်နောက်ခံဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားအကူအညီများ ရယူထားကြောင်း၊ ပရဟိတအသင်းများသည် မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို ငွေအားဖြင့် ဖိခိုင်းနေကြောင်း စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဆန္ဒပြသူများက ပြောဆိုခဲ့သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 1:20 PM No comments:
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ Tyla မြို့နဲ့ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့တို့ရှိ မြန်မာသံရုံးမှ အရာရှိ ဝန်ထမ်း မိသားစုများမှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား ကန်တော့ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပုံ
ယနေ့ တပ်မတော်က လူကြီးတွေကို “အဘ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲလာကြပြီးတော့ နယ်ဘက် ဝန်ကြီးဌာနတွေက ဝန်ထမ်းတွေကပါ ရောရောင်ပြီး “အဘ” လို့ နှုတ်ကျိုးကုန်ကျပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း အသံလွှင့်ဌာန မီဒီယာ တချို့ကပါ အဘလို့ဘဲ စတင် ခေါ်လာနေပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဘဆိုတာ ဘယ်တုန်းက စပေါ်လာတယ် ဆိုတာရယ်နဲ့ ဘာလို့ သုံးခိုင်းရတယ် ဆိုတာတွေကို အငြိမ်းစား တပ်မတော် အရာရှိများက စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား သို့ အခုလို သုံးသပ် တင်ပြသွားပါတယ်။
အဘဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်လာခဲ့ကြောင်း တပ်မတော် အရာရှိကြီး (ငြိမ်း) က ပြောလာပါတယ်။
စစ်တပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ်အင်္ဂါ ချို့ယွင်းခဲ့ရသည့် စစ်သားများသည် တစ်နှစ်လျှင် ငွေကျပ်သုံးသောင်း ထောက်ပံ့ပေးကြောင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒု-၀န်ကြီး၏ သြဂုတ် ၂၈ ရက်က လွှတ်တော်တွင် ရှင်းလင်းဖြေကြားချက်တွင် ပါရှိသည်။
မသန်စွမ်း ဖြစ်သွားသည့် အငြိမ်းစား စစ်သားများအတွက် နိုင်ငံမှ ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးရန်နှင့် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများ
နှင့် ၎င်းတို့မိသားစုများ၏ ဘ၀ကို မြှင့်တင်ပေးရန် သြဂုတ် ၂၈ ရက်က အောက်လွှတ်တော်တွင် အမတ်သုံးဦးက အရေးဆိုသဖြင့် ဒု-၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ညွန့်က ပြန်လည်ဖြေကြားစဉ် ထိုအချက်အလက် ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:50 AM No comments:
“ဦးရွှေမန်းနဲ့ ဦးသိန်းစိန် ပဋိပက္ခ သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်တာပေါ့”
သူရ ဦးရွှေ မန်း နာယက အဖြစ် ဆောင် ရွက်နေသော ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် က ဖွဲ့စည်းထားသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ လေ့လာ သုံးသပ်ရေး ကော်မတီက ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်မတိုင်မီ အခြေခံဥပဒေကို အပြီး လေ့လာ သုံးသပ်တော့မည်ဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ လတ်တလော အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်အကြား၊ တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် အာဏာရ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အကြား အဆင်မပြေမှု များရှိနေရာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်မှု အပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ခြေ များနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဒီမိုကရက် တစ်ပါတီ(ကျားဖြူ)မှ သီပေါမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲထွန်းကို ဧရာဝတီ အယ်ဒီတာ အဖွဲ့ဝင် သာလွန် ဇောင်းထက်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါသည်။
သမ္မတဟောင်း ဦးနေဝင်း သမီးပိုင် နဝရတ် ဟိုတယ်ကို ကြွေးကျန် ဒေါ်လာ နှစ်သန်းကျော် ဆပ်ရန် အစိုးရ သတိပေး
နိုင်ငံတော် သမ္မတဟောင်း ဦးနေဝင်း၏ သမီး ပိုင်ဆိုင်သော နဝရတ် ဟိုတယ်က ဟိုတယ်နှင့် ခရီး သွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနသို့ ကြွေးကျန် အမေရိကန် ဒေါ်လာ နှစ်သန်းကျော်ကို သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပေးဆောင်ရန် အစိုးရက တရားဝင် သတိပေးစာ ပို့ထားကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ပြည်သူ့ ငွေစာရင်း ပူးပေါင်း ကော်မတီ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:48 PM No comments:
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ စွမ်းရည်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများ အငြိမ်းစားရဲမှူးကြီးတို့ ဝေဖန်
လေ့ကျင့်မှု အရည်အသွေးနှင့် သင်တန်းများ လိုအပ်နေပြီဟု ထောက်ပြ
အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးတွင် အခရာကျသော အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည့်အပြင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပဋိပက္ခတစ်ခုကို ဖြေရှင်းနိုင်မှုတို့တွင် အရည်အသွေး များစွာ နိမ့်ကျလျက်ရှိသည်ဟု အငြိမ်းစား ရဲမှူးကြီးတို့က
၀န်ကြီးဌာနငါးခု ကျပ်သန်း သုံးသောင်းကျော်နှင့် ကန်ဒေါ်လာ ၂၂ သန်းကျော် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် အကြွေးကျန်နေ
အစိုးရ၏ ၀န်ကြီးဌာနငါးခုက ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေသို့ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် ကျပ်ငွေသန်းပေါင်း သုံးသောင်းကျော်နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂ သန်းကျော် ရှိနေသည်ဟု လွှတ်တော်၏ ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီက သြဂုတ် ၂၇ ရက်၌ လွှတ်တော်တွင် ထုတ်ဖော် အစီရင်ခံလိုက်သည်။
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေသို့ ပြန်ထည့်ရန် ကြွေးကျန်နေသည့် ၀န်ကြီးဌာနများမှာ စက်မှု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သတ္တုတွင်းနှင့် ဟိုတယ်/ ခရီး ၀န်ကြီးဌာနများဖြစ်ကြပြီး ယင်းဝန်ကြီးဌာန ငါးခုပေါင်း၏ ပေးရမည့် ကြွေး ကျန်ငွေ အတိအကျမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း ၃၂၄၅၅.၉၁၁ နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂.၈၉ သန်းဖြစ်သည်။
ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက် ည စစ်ကိုင်းတိုင်း ကန့်ဘလူမြို့နယ် ထန်းကုန်းကျေးရွာတွင် တဖန်ပြန်လည် ဖြစ်ပွားလာခဲ့သော ဘာသာရေးခွဲခြားမှု အကြောင်းပြုပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ် အိုဟေး ကင်တာနား၏ မိတ္ထီလာခရီးစဉ်အတွင်း ကားကို ဝိုင်း၍ ထုရိုက်ခံရအပြီး ၄ ရက်အကြာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပေါ်တာထမ်းသမားများနဲ့ မြန်မာ့ တပ်မတော် စစ်သည်တစ်ဦး
တပ်မတော်သားများဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာက စွပ်စွဲကြတဲ့ အချက်အလက်တွေ အထဲမှာ ပေါ်တာခေါ်ဝန်ထမ်း ချောဆွဲတဲ့ကိစ္စဟာ အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်း၊ ပေါ်တာတွေဟာ အမှန်တကယ် ဒုက္ခဆင်းရဲ ဖြစ်ကြရသလို လက်နက်ကြီး၊ ဗုံးသီး၊ ကျည်ဆံ၊ ရိက္ခာများ တနင့်တပိုး ထမ်းရတဲ့အတွက် ပင်ပန်းဆင်းရဲ နွမ်းနယ်လှပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 12:31 AM No comments:
နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်သင်တန်းဟာ နိုင်ငံတော်ကချမှတ်တဲ့ Policy နဲ့အညီ Grand Strategy ကို အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်တဲ့ Higher Leader တွေ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေရေး ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးတဲ့ သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကတော့ စစ်ဘက်နှင့် မြို့ပြဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ရာထူးများကို ထမ်းဆောင်နေကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များအား မျက်မှောက်ကမ္ဘာ့အခြေအနေ၊ ပြည်တွင်းအခြေအနေများနှင့် စွမ်းအားစုများကို သိရှိနားလည်စေ၍ စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့် ခေတ်မီသိပ္ပံဆိုင်ရာများကို တစ်ဦးချင်းနှင့် အဖွဲကလိုက် စုပေါင်းဖေါ်ထုတ်တတ်ကြပြီး နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများနှင့်အညီ နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံရေးအမြင်၊ စစ်ရေးအမြင်၊ စီးပွားရေးအမြင်၊ အုပ်ချုပ်ရေး အမြင် စသည့်အမြင်လေးမြင်ဖြင့် တွေးခေါ်မြှော်မြင်၍ မှန်ကန်သော အယူအဆများ၊ တိကျပြတ်သား သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ချမှတ်လုပ်ဆောင်စေရေးအတွက် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အနာဂါတ် အမျိုးသားရေး မဟာဗျူဟာကို ချမှတ်ရန်အလို့ငှာ နိုင်ငံတော်အဆင့် မူဝါဒများကို လေ့လာစူးစမ်းဖေါ်ထုတ်ရန်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ့် အရည်အချင်းမြင့်မားတဲ့ မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို လေ့ကျင့် မွေးထုတ်ပေခဲ့ကြောင်း၊ ဒီသင်တန်းမှာ ကမ္ဘာထိပ်တန်းနိုင်ငံတွေ၊ စစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံများရဲ့ အုပ်စုတွေ၊ မျိုးနွယ်တူနိုင်ငံများရဲ့ အုပ်စုတွေ၊ စီးပွားဖက်နိုင်ငံများရဲ့ အုပ်စုတွေ၊ ဒေသအလိုက် နိုင်ငံများရဲ့ အုပ်စုရဲ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို နိုင်ငံရေး ရှုထောင့်က လေ့လာသင်ကြား ပေးခဲ့ကြောင်း၊ အထောက်အကူပြု ဘာသာရပ်တွေကို ပညာရှင်များ၊ တာဝန်ရှိသူများကိုယ်တိုင် လာရောက်ဆွေးနွေး ပိုချခဲ့ကြောင်း၊ ဒီသင်တန်းတွေကို အောင်မြင်စွာ တက်ရောက်ပြီးရင် သမိုင်းသစ်ကို ဖန်တီးနိုင်တဲ့ လူသားအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 12:23 AM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 12:21 AM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 12:16 AM No comments:
ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ် ကျောဘက် ၃၂ လမ်း ထဲမှာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကြီးတခု လုပ်နေပါတယ်။
ဗလာမဲပေါက်သူအများအပြားရှိသလို ကံကောင်းသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:27 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တပ်ပိုင်မြေဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် တွေကို မြင်ဖူးကြမှာပါ။ တပ်ပိုင်မြေဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ အများပြည်သူအနေနဲ့ အတိအကျ မသိနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် တပ်ပိုင်မြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ တင်ပြဆွေးနွေးကြရာမှာ အခုတော့ တပ်ပိုင်မြေတွေထဲက ဧက ၃ သောင်း ၇ ထောင် ကျော်ကို ပြန်လည် ပေးအပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 4:01 PM No comments:
(Burma VJ media)
စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ် ဆိုတာဟာ တပ်မတော်တွင်းသို့ တပ်သားသစ်အဖြစ် ၀င်ရောက် အမှုထမ်းသူများအား အခြေခံစစ်ပညာများသင်ကြားပေးရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ကတော့ လေ့ကျင့်ရေးတပ် (လကရ) လို့ ခေါ်ရာကနေ နောက်ပိုင်းမှာ စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်၊ တိုင်းဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးတပ်များကို တပ်မတော်တန်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းလို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်များရဲ့ အတိုကောက်သုံးကတော “စခတ” ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတင်ပြမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ အမှတ်(၂)စစ်အခြေခံ လေ့ကျင့်ရေးတပ်ရဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ တတိယလေးလပတ် ဦး/ရေး/ထောက်ဆိုင်ရာ တင်ပြချက် ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာလိုသူများ၊ အချက်အလက်ကိုးကားလိုသူများအနေနဲ့ Download ရယူ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 5:03 PM No comments:
စခတ(၂)မှ တပ်သားသစ်အပတ်စဉ်တစ်ခု၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ
မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ အင်အားတိုးချဲ့ရေးနဲ့ခေတ်မီရေးကို အပြင်းအထန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ တဲ့အတွက် အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်းမှာ ဗီယက်နမ်ပြီးရင် ဒုတိယအင်အား အကြီးဆုံးစစ်တပ် ဖြစ်လာခဲ့ပါ တယ်။ နိုင်ငံရဲ့အဆီအနှစ်တွေကို ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော် ၀ါးမြိုစားသုံးပြီး ခေတ်မီတပ်မတော် တည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့ ထင်သလောက်ခရီးမပေါက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ စစ်အာဏာရှင် တွေဟာ တပ်မတော်ကို လက်ကိုင်တုတ်သဖွယ် အသုံးချခဲ့တာကြောင့် ပြည်သူလူထုနဲ့ဝေးကွာလာ ခဲ့သလို စစ်အင်အားကို ကြီးထွားလာအောင် အလောတကြီး တိုးချဲ့တာကြောင့် ကလေးစစ်သား ပြဿနာ၊ စစ်ပြေးပြဿနာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံမပြည့်တဲ့တပ်တွေများပြားလာတဲ့ပြဿနာ အစရှိသော ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေ အများအပြား ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
“စစ်အာဏာရှင်တွေ ဟာ နိုင်ငံရဲ့အဆီအနှစ်တွေကို ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော် ၀ါးမြိုစား သုံးပြီး ခေတ်မီ တပ်မတော် တည်ဆောက် ခဲ့ပေမဲ့ ထင်သလောက် ခရီးမပေါက်နိုင်ခဲ့ပါ ဘူး။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ဟာ ကိုယ်ကျိုး အတွက် တပ်မတော်ကို လက်ကိုင် တုတ်သဖွယ် အသုံးချခဲ့တာကြောင့် ပြည်သူလူထုနဲ့ဝေးကွာလာခဲ့သလို စစ်အင်အားကို ကြီးထွားလာအောင် အလောတကြီး တိုးချဲ့ခြင်းကြောင့် ကလေးစစ်သားပြဿနာ၊ စစ်ပြေးပြဿနာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံမပြည့်တဲ့တပ်တွေ များပြားလာ ခြင်းပြဿနာ အစရှိတဲ့
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 4:36 PM No comments:
မြန်မာပြည်မှ ပေါက်ကြားမှုများ ကဏ္ဍဖြင့် အများပြည်သူသိအောင် ထုတ်လွှင့်တော့မည်
မိမိတို့ အနေဖြင့် စစ်အာဏာရှင် အဖွဲ့ အစည်းများ၏ လျှို့ဝှက်ချက် အထောက် အထားများ၊ လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာချိုးဖေါက်မှု များ၊ တရားဥပဒေနှင့် မလျော်ညီသည့် စီမံလုပ်ကိုင်မူများ၊ အာဏာကို အလွဲသုံးစား ပြုမူများ ၊သမိုင်းရေးရာ အထောက်အထား များနှင့် အရပ်ရပ် လျှို့ဝှက်ချက်များစွာကို ယုံကြည်လေးနက်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ သော ၊ ဌာနအတွင်း/အပြင် ရဲဘော် ရဲဘက်များ အကူညီဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ စနစ်တကျစုဆောင်း နိုင်ခဲ့ပါသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 4:20 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်ရေး အရေးကြီးသလိုပဲ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက် အကောင်အထည် ဖော်သွားဖို့ကလည်း အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူ ဂျော့ခ်ျတောင်း တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခ ဒေးဗစ်စတိုင်းဘတ်က ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ ကနဦး ခြေလှမ်းတရပ်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လေ့လာစိစစ်ရေး လွှတ်တော်ကော်မတီက သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်နိုင်ရေးမှာ အဓိက ဘယ်အရာတွေက စိန်ခေါ်မှုတွေ ဖြစ်နေတာပါလဲ။ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မခင်ဖြူထွေးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
သမ၀ါယမ ၀န်ကြီှးဌာန တရုတ် ချေးငွေကိစ္စ လွှတ်တော်တွင် ကန့်ကွက်မှုများရှိ
သမ၀ါယမ ၀န်ကြီးဌာန က တရုတ်နိုင်ငံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ချေးယူမည်ကို လွှတ်တော်၌ သဘော တူညီမှု ရှိမရှိ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီနှင့် တခြားပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များက ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသော်လည်း အတည်ပြုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီနှင့် စစ်တပ် ကိုယ်စားလှယ်များမှအပ အတိုက်အခံ ကိုယ်စားလှယ်အများစုက သဘော မတူကြသော်လည်း မတ်တတ်ရပ်၍ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ မတ်တတ်ရပ်ပြသူ နည်းပါးသဖြင့် ထိုတရုတ်ချေးငွေ ကိစ္စကို ပြည်ထောင်စု လွှတ် တော်က အတည်ပြု သဘောတူ ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာပြည်ကနေ ဟိုတနေ့က ထွက်သွားတဲ့ ကင်တားနားက သူ့ကို အစိုးရက သင့်တော်တဲ့ လုံခြုံရေး မပေးခဲ့ဘူး ဆိုတဲ့သဘော ပြောသွားပါတယ်။
မိတ္ထီလာမှာ သူ့ကားက လူ ၂ဝဝ လောက် ရှိတဲ့ လူအုပ်ကြီးနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ကားမှန်တံခါးတွေ ထုရိုက်ခံရတယ်လို့ ကင်တားနားက ဆိုပါတယ်။
ကင်တားနားကြီးရဲ့ ပြောဆိုချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတပြောခွင့်ရအရာရှိ ဦးရဲထွဋ်က သူ့ Facebook မှာ မနေ့က ပြန်တုန့်ပြန်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့် လွှတ်တော်တွေ ကျင်းပနေတာ အခုဆိုရင် ၂ နှစ်ကျော် (သက်တမ်း တ၀က်ခန့်ရှိ)လာပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်စားလှယ်တချို့ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေနဲ့ ထိတွေ့မှု အားနည်းသလို၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ ထိရောက်မှုမရှိတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ အဆို တချို့ကို မေးမြန်း ဆောင်ရွက်နေတာတွေလည်းပဲ တွေ့နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 11:20 AM No comments:
ယခင်စစ်အစိုးရ လက်ထက်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို နိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ် အသုံးပြု ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုများ အဆုံးသတ်နိုင်ရေး ပြင်ဆင်ချက်အဆိုတခုကို ယနေ့ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပနေသော ပြည်သူ့ လွှတ်တော်က လက်ခံဆွေးနွေးရန် သဘောတူ လက်ခံလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ခင်ဗျား ဘာတတ်သလဲ? ဆရာဝန်လား? အင်၈ျင်နီယာလား? ပရောဖက်ဆာလား? အန်ဂျီအိုလား? ခင်ဗျားတတ်တာတွေ အကုန်လုံး တိုင်းပြည်ရဲ့ ခြံစည်းရိုးမှားချိပ်ထားခဲ့၊ ဘာမှကို ယူမလာနဲ့….. သြော် တခု သေချာပေါက်ပြောရမှာတော့ရှိတယ်၊ ခင်ဗျား ဒေါ်လာ၊ ယူရို တခုခုတော့ ယူခဲ့…
ကျနော်တို့၏ နေပြည်တော် ရွာအား ဒကြီး ဦးစိန်ပြောင်အုပ်ချုပ်သည်။ သူက ပေါ့သေးသေးမဟု မတော်သောသူများနေသော တပ်တခု ( တပ်မတော်)ဟုခေါ်သော နေရာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် ကျနော်တို့ နေပြည်တော် ရွာသို့ ဒကြီးအဖြစ်ရောက်ရှိလာသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:14 PM No comments:
ကင်တာနာကို ဦးသိန်းစိန် လက်ခံတွေ့ဆုံဖို့ လုံးဝ မရှိဟု ဆို
မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးစုံစမ်းရေးမှူး မစ္စတာ သောမတ် အိုဟေး ကင်တာနာကို သမ္မတ ဦးသိန်စိန်အနေနဲ့ လုံးဝ ( လုံးဝ) တွေ့ဆုံရန် အစီအစဉ် မရှိဘူးလို့ သမ္မတရဲ့ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးရဲထွဋ်က ဖေ့စ်ဘုတ်ကတဆင့် အသိပေးလာပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 5:13 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 3:49 PM No comments:
စစ်တပ်၏ နေမှု၊ စားမှု အတွက် နိုင်ငံတော်မှ တရားဝင်ပေးထားသည့် လစာနှင့်သာ ရပ်တည်သင့်ပြီး လယ်ယာမြေ သိမ်းယူခြင်းမျိုး မပြုလုပ်သင့်ဟု ဦးမင်းကိုနိုင် ပြောကြား
စစ်တပ်၏ နေမှု၊ စားမှုအတွက် နိုင်ငံတော်မှ တရားဝင် ပေးထားသည့် လစာနှင့်သာ ရပ်တည်သင့်ပြီး လယ်ယာမြေ သိမ်းယူမှုများ မပြုလုပ်သင့်ဟု ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့ အဖွဲ့အစည်းမှ ဦးမင်းကိုနိုင်က ပြောကြားသည်။
သြဂုတ် ၁၉ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၊ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်ရှိ ဓမ္မပီယ ကျောင်းတိုက်တွင် ပြုလုပ်သော တောင်သူ လယ်သမားများ၏ အသံစုစည်းခြင်း ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း စစ်တပ်မှ သိမ်းယူထားသော လယ်ယာမြေများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာများ ရှိနေသည့်အပေါ် မေးမြန်းခြင်းကို ဖြေကြားရာတွင် ၎င်းက ယင်းကဲ့သို့ ထည့်သွင်း ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ အာဏာမပြရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က သြဂုတ်လ ၁၉ ရက် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်ခန်းမတွင် ပြုလုပ်သည့် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လူမှုစီးပွား မြှင့်တင်ရေး အခမ်းအနားတွင် ပြောသွားသည်။
"ကျေးရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် လူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ တော်ဖို့
ကောင်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ရှေးဦးစွာ ကျေးရွာတွေမှာ တရာဥပဒေစိုးမိုးအောင်၊ လောင်းကစားဝိုင်းတွေ၊ အရက်ပုန်းချက်လုပ်တာတွေ၊ ချဲထီဒိုင်တွေ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ မရှိအောင် ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ရပါမယ်။ သို့မှာသာ ရာဇဝတ်မှု၊ မုဒိမ်းမှု၊ လုယက်မှု၊ ခိုးမှုတွေကင်းစင်ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့ ကျေးရွာတွေဖြစ်လာပြီး စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးတွေ တိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု မရှိဘဲ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘဲ၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိဘဲ ဘယ်လိုမှ တိုးတက်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပါဘူး။ ရာထူးဆိုတာ အာဏာပြဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။" ဟု သမ္မတက ပြောသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:31 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 7:00 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 3:14 PM No comments:
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်များ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်စိတ် အမြဲမွေးမြူထားကြကြရန် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က စစ်ဘက် အရာရှိများနှင့် သင်တန်းသား အရာရှိများကို သြဂုတ် ၁၇ ရက်တွင်
ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ စစ်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်းသဘင် ခန်းမဆောင်၌ ပြောကြားလိုက်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ ပြောကြားမှုကို အစိုးရပိုင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် မျက်နှာဖုံးသတင်းအဖြစ် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်တွင် ဖေါ်ပြပါရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:37 PM No comments:
မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းသူများကို ရဲများ မျက်ကွယ်ပြုနေဟု ဒေါ်စုဦးဆောင်သည့်ကော်မတီ တွေ့ရှိ
ရဲများက မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများကိုသာ အဓိကထား ဖမ်းဆီးနေပြီး ရောင်းချသူများကိုမူ ဖမ်းဆီးခြင်းမရှိဘဲ မျက်ကွယ်ပြုထားသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီက သြဂုတ် ၁၂ ရက်တွင် အောက်လွှတ်တော်တွင် အစီရင်ခံစာ တင်ပြခဲ့သည်။
ထိုသို့ ရဲများက မူးယစ်ဆေးရောင်းသူများကို မျက်ကွယ်ပြုနေမှုကြောင့် မူးယစ်ဆေးပြဿနာမှာ ကြီးထွားနေရသည် ဟုလည်း အစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသေးသည်။
ရိက္ခာဖြည့်တင်းရေးအတွက် စစ်သုံးကားကြီးများ ရောက်ရှိလာပုံ
ရိက္ခာစုပုံ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူနေချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့တပ်ရင်း စစ်ဆင်ရေး ထွက်လာတဲ့ ကာလဟာ သုံးလကျော်လို့ လေးလထဲ ရောက်လာပါပြီ။ တိုက်ပွဲကြီးတစ်ပွဲမှ မတိုက်ရသေးဘဲ ချောင်းပစ်၊ မိုင်း ထောင် ပစ်ပြေးဘဲ မကြာခဏ ကြုံရပါတယ်။ စစ်တိုက်ဖို့လောက်ဘဲ သိထားတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ စစ်တိုက် တာထက် အရေးကြီးတဲ့ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စတွေနဲ့ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းနေရတော့မှ ကျောင်းက ဆရာကြီးတွေရဲ့ စကားကို ပြန်ကြားနေမိပါတော့တယ်။ အထူးသဖြင့် ဗထူး တပ်ကြပ်သင်ကျောင်းက ဆရာကြီးတွေဟာ တကယ့်စစ်မြေပြင် အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်ခဲ့ သူတွေ ဖြစ်လို့ တိုက်မယ် ခိုက်မယ်ဘဲသိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို စစ်မြေပြင်မှာ တကယ်ကြုံတွေ့ရမယ့် အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စတွေကို အမြဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဆင့်ဆင့်သော အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ပြည်သူလူထုကို ဗဟိုမပြုဘဲ အထက်လူကြီး များကိုသာ ဗဟိုပြု
အဆင့်ဆင့်သော အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည် ပြည်သူလူထုကို ဗဟိုမပြုဘဲ အထက်လူကြီး များကိုသာ ဗဟိုပြုနေကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီ အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။
နအဖခေတ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့်ကို TV မင်းသားလို့ လူတချို့က မှတ်ချက်ပြုကြသလို ယနေ့ အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကိုလည်း စစ်တပ်နဲ့နီးစပ်သူများက အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်စစ်တပ်က ရုပ်ချောနုပျို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ တူတယ်လို့ “မွှန်း” ဆိုကြပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ အသက်အရွယ် ၅၀ ကျော်လာသည့်တိုင် အောက်ဒိုးတွေမှာ မျက်မှန်တပ်ဆင်မှု မရှိသေးတာရယ်၊ တချို့စစ်ဗိုလ်တွေလို ဗိုက်ရွဲပြီး ရုပ်ရင့်ထော်တဲ့ ပုံစံမျိုးနှင့် မတူတာကြောင့် သူ့အသက်အရွယ်နဲ့ လက်ရှိ ရာထူး နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် နုပျိုတယ်လို့ ကောက်ချက်ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်တွေမှာ တခြားနိုင်ငံတွေက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် စကာင်္ပူနိုင်ငံ စစ်ဦးစီးချုပ်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဖြင့် ရုပ်ရင့်ထော်တဲ့သူတွေ များနေပါတယ်။ သူကရုပ်နုနေတာကြောင့် မျက်မှန် တပ်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှကတောင် ပိုရုပ်ရင့်နေသလို အသက်ကြီးနိုင်တယ်လို့ ယူဆစရာ ရှိနေပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 3:50 PM No comments:
သက်တမ်း လ ၃၀ သာ ကျန်တော့သည့် အစိုးရ၏ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်း ၇ ရပ် သမ္မတရုံး ဖေါ်ပြ
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် အစိုးရဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်များ သြဂုတ်လ ၉ ရက်တွေ့ဆုံမှုအတွင်း
ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ် ၇ ခုကို သမ္မတရုံး၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်
ဆင်သတ်ပြီး အစွယ်ဖြတ်ယူနေသည့် ဆင်စွယ်ခိုးဂိုဏ်းများကို ဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းစဉ် သံသယတရားခံများကို ရိုက်နှက်စစ်ဆေးသည်ဟုဆိုကာ ငပုတောစခန်းမှူး ရဲအုပ် စိုးမင်းအား မြန်မာနိုင်ငံ ရဲချုပ်က ရဲတပ်ဖွဲ့မှထုတ်ပယ်၍ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ် ချမှတ်မှုမှာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညီ မညီ မေးခွန်းများ ထွက်လာနေသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ရန်
ကြောက်မနေသင့်ဟု သြဂုတ်လ ၈ ရက်တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နိုင်ငံတော်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စာရင်းများ မစစ်ဆေးနိုင်သေး
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နိုင်ငံတော်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရရှိသည့် ဘတ်ဂျက်ငွေနှင့် သုံးစွဲရသည့် ကုန်ကျစရိတ် ငွေစာရင်းအတိအကျကို စစ်ဆေးပြုစုနိုင်ခြင်းမရှိ သေးကြောင်း အစီရင်ခံစာကို သြဂုတ် ၈ ရက်က ပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး တွင် လွှတ်တော်အမတ် အားလုံးက သဘောတူလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ ရငွေ၊သုံးငွေများကို စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသည့် အစီရင်ခံစာမှာ ကွဲလွဲနေသည်ဟုလည်း အစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:16 PM No comments:
ကုလားကိုရောင်းမှာလား .. တရုတ်ကိုရောင်းမှာလား နဲ့ မြန်မာ့လွှတ်တော်
လွှတ်တော် ကျင်းပနေတဲ့ကာလမို့ SKY NET က ထုတ်လွှင့်ပြ သသော လွှတ်တော် ကဏ္ဍကို သတိပြုကြည့်မိပါ တယ်..။ နိုင်ငံရေး သမား မဟုတ်ပေမယ့် လည်း တပည့်များ ကို စာသင်နေတဲ့ ဆရာမမို့ ခေတ် ကို အများကြီးပြတ် ကျန်သွားလို့ မရပါဘူး။
လူငယ်တွေက သူတို့ခေတ်ရေစီးထဲက ဆရာမဆို သဘောကျပါတယ်။ သူတို့ကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးများ ဆိုညည်းပြတဲ့အခါ ဆရာမက ဒီသီချင်းတတ်တယ်ဆိုပြီး သူတို့တွေ မျက်ဝန်းထဲ အရောင်တွေလက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မဆလခေတ် ၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှုကာလမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့ပါတယ်။
အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့က စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့ပါ။
အဲဒီမနက်မှာ ဦးနေ၀င်းအိမ်ကနေ မဆလ ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကို ဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်၊ ဒါနဲ့မဆလ ထိပ်သီး ၆ ယောက် ဦးနေ၀င်းအိမ်ကို အခစားဝင်ကြပါတယ် တဲ့။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ညီလာခံမှာ ပါတီ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူ တွေ့ရတဲ့ ဦးဌေးဦး၊ ဦးရွှေမန်းနဲ့ ဦးအောင်သောင်း
၁၉၈၈ ခုနှစ်က လက်လွတ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် အခွင့်အရေး (ရှစ်လေးလုံး ငွေရတု အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုခြင်း)
၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုကာလအတွင်း တပ်မတော်သားတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု
ဆောင်းပါးရှင် – ဗိုလ်ထက်မင်း (RFA ထုတ်လွှင့်ချက်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
အယ်ဒီတာအဖွဲ့ တင်ပြချက်။ ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုမှုဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ မကြုံစဖူး ထူးထူးကဲကဲ ကြီးမားခဲ့ပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:34 PM No comments:
ဒီတပတ် မြန်မာ့ မျက်မှောက်ရေး ရာ ဆွေးနွေးခန်းမှာ မြန်မာလူထုရဲ့  ၁၉၈၈ ခုနှစ် အရေးတော်ပုံကို အစောဆုံး၊ အထိမိဆုံး မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ဆရာ Outrage: Burma's Struggle for Democracy စာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့သူ Bertil Lintner နဲ့ မြန်မာ့အရေး တစိုက်မတ်မတ် လေ့လာနေတဲ့ ပါမောက္ခ David Steinberg တို့ကို ဦးကျော်ဇံသာ က ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးသုံးသပ် တင်ပြထားပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:23 PM No comments:
မြန်မာအတိုက်အခံတွေကို ထိုင်းကကူညီနေဟု မြန်မာစစ်တပ်ပြစ်တင်
ထိုင်း-မြန်မာ တိုင်းအဆင့် နယ်ခြားကော်မတီ အစည်းအဝေး RBC မှာ မြန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အာဏာ ပိုင်တွေက ထိုင်းလုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေကို “အစိုးရအတိုက်အခံတွေကို ကူညီထောက်ပံ့တယ်” လို့ ပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် (ဂျူလိုင်လ နှောင်းပိုင်း) က တိုင်းအဆင့် ထိုင်း- မြန်မာ နယ်ခြားကော်မတီ RBC အစည်းအဝေးကို ဖိတ်ပူးရီးခရိုင် ချအမ်းမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ရာမှာ မြန်မာဘက်က တာဝန်ရှိသူတွေ က အခုလို ပြစ်တင်ပြောဆို လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 11:26 PM No comments:
တပိုတိုက်ပွဲ အတွေ့အကြုံ - အပိုင်း (၁) (ရှစ်လေးလုံး ငွေရတု အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုဆောင်းပါး)
မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး ABSDF ဂုဏ်ပြုခံ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ
အယ်ဒီတာအဖွဲ့၏ တင်ပြချက်။ ။ ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်၏ ပင်တိုင် ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးရှင် ကိုကျော်ထင်သည် ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်တွင် ထိပ်ပိုင်း ရာထူးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်နည်းတူ အောက်ခြေစစ်မြေပြင် တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံများကိုလည်း အထိုက်အလျောက် ရယူနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ တပိုတိုက်ပွဲ အတွေ့အကြုံကို ပေးပို့လာရာ န၀တခေတ် အမျိုးသားညီလာခံအား အတုအယောင်ညီလာခံ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးအရ မီးမောင်းထိုးပြကာ လှုပ်ရှား အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ခဲ့ပြီး စစ်ရေးအရလည်း အောင်မြင်ခဲ့သော တိုက်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်သောကြောင့် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံအကြို ဂုဏ်ပြု ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ ကျနော် အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ကျောင်းသားတပ်မတော်သားဘ၀ ဖြတ်သန်းစဉ်ကာလ ဗဟို စစ်ရေးဌာနတွင် စစ်ရေးဌာန အတွင်းရေးမှူး အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသော်လည်း တိုက်ပွဲ အတွေ့အကြုံမှာ အနည်းငယ်သာ ရှိပါတယ်။ ထိုတိုက်ပွဲ အတွေ့အကြုံများမှာ ကော့မူးရာ ၀မ်းခစခန်း တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံ၊ ဥူးသုထတိုက်ပွဲ အတွေ့အကြုံနဲ့ တပိုတိုက်ပွဲ အတွေ့အကြုံတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျနော့်အနေဖြင့် ပထမတိုက်ပွဲ (၂) ခု ဖြစ်တဲ့ ကော့မူးရာဝမ်းခနဲ့ ဥူးသုထတိုက်ပွဲ အတွေ့အကြုံများကို ရေးသား မှတ်တမ်းတင်ခြဲ့ပီး ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:24 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:42 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:38 PM No comments:
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင် ဆင်ရေး ပြန်ပြီး သုံးသပ်ဖို့အတွက် အဖွဲ့ဝင် (၁၀၉) ပါဝင်တဲ့ ကော်မတီကို ဇူလိုင်လ (၂၅) ရက်နေ့က ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ တိုင်းရင်းသားပါတီဝင် အမတ်တွေနဲ့ တပ်မတော်အမတ်တွေပါ ပါဝင်ပြီး ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အလားအလာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး BNI (Burma News International) ခေါ် တိုင်းရင်းသားမီဒီယာအဖွဲ့ရဲ့  အတိုင်ပင်ခံအယ်ဒီတာ ဦးဇင်လင်း က အခုလို သုံးသပ်ပါတယ်။
ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ကို ပြုပြင် ဖွဲ့စည်းခြင်း - အပိုင်း (၇)
အယ်ဒီတာအဖွဲ့၏ တင်ပြချက် ။ ။ အာရှနိုင်ငံအများစုက အနောက်တိုင်း ဒီမိုကရေစီပုံစံကို တိုက်ရိုက်သွတ်သွင်း မပြုလုပ်ချင်ကြတာကို သူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဓလေ့ထုံးစံအား လက်ညွန်းထိုးပြီး ငြင်းဆန်နေကြပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရက ဥရောပရှိနိုင်ငံများ ပြိုကွဲတာကို ထောက်ပြပြီး တပ်မတော်က (၂၅) ရာခိုင်နူန်း အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှု ကဏ္ဍမှာ အမြဲတမ်း ပါဝင်ရမယ်လို့ ဆိုနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာဏာရှင်များကို ပြန်လည်အသက်သွင်းမည့် သို့မဟုတ် အကာအကွယ်ပေးမည်ဆိုတာကို ပြည်သူလူထုက စိုးရိမ်ပူပန်နေပါတယ်။ အဆိုပါ ဆောင်းပါးကို တင်ပြနေရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ လက်ရှိမြန်မာအစိုးရရဲ့လိုလားချက်အတိုင်း ဖေါ်ပြ နေတာမဟုတ်သလို တချို့အတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားကို မျက်ကွယ်ပြုတာမဟုတ်ကြောင်း သတိပြုစေ လိုပါတယ်။ AAPP နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းက ထုတ်ဝေတဲ့ အဆိုပါ အသွင်ကူးပြောင်းရေး စာအုပ်မှ အချက်အလက်များဟာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိ အထင်ကရတာဝန်ထမ်းဆောင်းခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် များရဲ့အတွေ့အကြုံများကို နိုင်ငံအကျိုးအတွက် လေ့လာမှတ်သားနိုင်ရန်သာဖြစ်ပြီး စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား ၀က်ဆိုဒ်ရဲ့ အာဘော်မဟုတ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:17 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များကို ကြိုဆို လိုက်သော်လည်း လာမည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတလောင်း ဖြစ်ခွင့်မပေးလျှင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်း၏ လှောင်ပြောင်စရာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ဗြိတိသျှ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ Mr. John Bercow က ပြောဆို လိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်သော ဗြိတိသျှ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ Mr. John Bercow က ရန်ကုန် ကမာရွတ် မြို့နယ်ရှိ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတုခန်းမတွင် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ အပါအ၀င် မြန်မာ့ ပညာရေး အသိုင်းအ၀န်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ သတင်းထောက်များနှင့် ယနေ့မနက် တွေ့ဆုံ မိန့်ခွန်း ပြောကြားစဉ် ထိုသို့ ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:56 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:55 PM No comments:
ရှစ်လေးလုံး လူထုအရေးတော် ပုံကြီးရဲ့ ငွေရတုကာလမှာ ဒီမေးခွန်းကို မေးကြည့်တာပါ။
မြန်မာပြည်ကို စစ်ခေါင်းဆောင်တွေချည်း အုပ်ချုပ်လာတာ နှစ်ပေါင်း ရာစုနှစ်တ၀က်တောင် ကျော်လာပြီ။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကနေ အခုအချိန်အထိပါပဲ။ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ အမည်ခံထားတဲ့ လက်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေရဲ့ အစိုးရက ဖြေလျှော့မှုတချို့ကို လုပ်နေတယ်။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း အာဏာသိမ်းထားတဲ့ နှစ်တွေကိုလည်း “ ရွေးချယ်မှု choice မဟုတ်ဘဲ လိုအပ်ချက် necessity “ လို့ ဆင်ခြေပေးကြတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ချန်ပီယံလို့ နာမည်ခံချင်တာပါပဲ။